Tababarihii Chelsea oo shaqadii laga eryey 2 saac ka dib guuldaradii Everton (sawiro) – SBC
Tababarihii Chelsea oo shaqadii laga eryey 2 saac ka dib guuldaradii Everton (sawiro)
Maamulka kooxda Chelsea ayaa goor dhaw shaaca ka qaaday inay xilkii ka xayuubiyeen oo ay eryeen tababarihii kooxdaasi Carlo Ancelotti 2 saac uun ka dib markii kooxda Chelsea ay guuldaro kala kulantey ciyaartii ugu dambeyey ee horyaalka Ingiriiska kooxda Eevrton.
51 sano jirka u dhashay wadanka Talyaaniga waxaa u harsanaa hal sano heshiiska uu ku joogi lahaa garoonka Stamford Bridge ee galbeedka magaalada London, waxaana la sheegay in la siin doono 6 milyan oo doolar oo magdhow ah.
Carlo Ancelotti sanadkii hore wuxuu kooxda Chelsea la qaaday laba koob oo kala ahaa Premiership-ka & FA-ga, waxaana warsaxaafadeed ka soo baxay maamulka kooxda lagu sheegay in go’aanka xilka looga qaaday tababare Anceloti ay tahay talaabo kooxda
Roman Abromovich wuxuu caan ku yahay tababare cayrinta
“Heerka kooxda ee ah inay ku guuldareysatay inay guulo gaarto, ayaa keenaya in isbadalkan la sameeyo, si kooxdu ugu diyaar garowdu xili ciyaareedka soo socda” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay maamulka kooxda Chelsea.
Chelsea gaar ahaan maalqabeenka iska leh ee Ruushka u dhashay Roman Abramovich, wuxuu caan ku yahay in uu tababaraayasha si deg deg ah xilka uga qaado marka uu dhamaado xili ciyaareedka hadii aanu keenin koob, sanadkii 2008-dii Avram Grant oo kooxda Chelsea soo gaarsiiyey Finalkii Champions League-ga & kaalinta labaad ee Premiership-ka.
“Yoolka kubad cagata ah ee Chelsea & gaaritaanka rabitaankeeda ma ahan mid isbadal ku yimid, waxaana hada inoo gabagabo ah magacaabista tababare cusub” ayaa lagu xusey bayaanka ka soo baxay maamulka kooxda Chelsea.
Halkan ka akhri warkan oo lagu qoray website-ka kooxda Chelsea
Ancelontti nin muhiim ah ayuu ahaa Chelsea, in sanad kasta la buriyo Tababare wax weyn ma soo kordhinayso, waa tababare cusub sanad kasta iyo inay is bartaan ciyaartoyda oo ay isla qaybsadaan.